Published Fri Jan 18 2019 20:07:48 GMT+0000 (UTC)
Zimbabwe buy various goods after some shops opened in Harare, Zimbabwe, Friday, Jan.18, 2019. Zimbabwe on Friday faced a "total internet shut down ", a media group said, after a days long violent crack down on people protesting a dramatic fuel price increase. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Thursday, Jan. 17, 2019 photo, Keith Frymore, a 21 year old security guard points to his torn lip after he was assaulted by a group of uniformed soldiers in Harare, Zimbabwe. Zimbabwe on Friday faced a "total internet shutdown," a media group said, after a days-long violent crackdown on people protesting a dramatic fuel price increase. Badly injured people streamed into a hospital in the capital after alleged assaults by security forces. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A man stands in a shop after failing to find bread as Zimbabweans shopped for various goods, in Harare, Zimbabwe, Friday, Jan. 18, 2019. Zimbabwe on Friday faced a "total internet shut down ", a media group said, after a days long violent crack down on people protesting a dramatic fuel price increase. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Pastor and activist Evan Mawarire, arrives handcuffed at the magistrates courts in Harare, Zimbabwe, Friday, Jan. 18, 2019. Zimbabwe Lawyers for Human Rights have said in a statement that Mawarire who is among the more than 600 people arrested this week has been charged with subverting a constitutional government amid a crackdown on protests against a dramatic fuel price increase.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Pastor and activist Evan Mawarire, top right, arrives handcuffed at the magistrates courts in Harare, Zimbabwe, Friday, Jan. 18, 2019. Zimbabwe Lawyers for Human Rights have said in a statement that Mawarire who is among the more than 600 people arrested this week has been charged with subverting a constitutional government amid a crackdown on protests against a dramatic fuel price increase.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A police officer guards exhibits recovered during fuel protests and on display outside the magistrates courts in Harare, Friday, Jan. 18, 2019. Among the items was a coffin which protestors used to signify the death of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa's administration. Injured people streamed into a private hospital in the capital as the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights said it had treated 68 cases of gun shot wounds and 100 plus other cases of "assaults with sharp objects, booted feet,baton sticks" and more. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A police officer takes note of some of the exhibits recovered during fuel protests and on display outside the magistrates courts in Harare, Friday, Jan. 18, 2019. Among the items was a coffin which protestors used to signify the death of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa's administration. Injured people streamed into a private hospital in the capital as the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights said it had treated 68 cases of gun shot wounds and 100 plus other cases of "assaults with sharp objects, booted feet,baton sticks" and more. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A police officer and court official a coffin recovered during fuel protests and on display outside the magistrates courts in Harare, Friday, Jan. 18, 2019. Protestors used the coffin to signify the death of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa's administration. Injured people streamed into a private hospital in the capital as the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights said it had treated 68 cases of gun shot wounds and 100 plus other cases of "assaults with sharp objects, booted feet, baton sticks" and more. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)